Plates Isgaarsiinta Muuqaalku - Joornaalka Naqshadeynta
Isniin 20 Bisha Laba Iyo Tobnaad 2021
Isgaarsiinta Muuqaalku Si loo muujiyo waaxyo kala duwan oo dukaanka qalabka ah Didyk Sawirro ayaa la yimid fikradda ah inay u soo bandhigaan dhowr taargo oo ay ku jiraan waxyaabo agab kaladuwan oo korkooda ah, oo loogu adeego hab makhaayad ah. Asalka cad iyo suxuunta cad waxay ka caawiyaan sidii loo xoojin lahaa agabyada loo adeegsaday waxayna u fududaynaysaa booqdayaasha dukaannada inay helaan waax gaar ah. Sawirada waxaa sidoo kale loo adeegsaday 6x3 mitir oo boodhadhka iyo boodhadh lagu dhejinayo gaadiidka dadweynaha oo dhan Estonia. Asalka cad iyo hal-abuurka fudud ayaa u oggolaanaya farriinta xayeysiintan xitaa in uu ku arko qofka gaariga raacaya.
Magaca mashruuca : Plates, Magaca naqshadeeyayaasha : Sergei Didyk, Magaca macmiilka : Didyk Pictures.
Sawir qaabeynta iyo qaabeynta sawir
Chirming Dhejis Talaado 25 Bisha Koobaad
Santander World Farshaxannada Magaalooyinka Isniin 24 Bisha Koobaad
Oli Baaquli Saytuun Axad 23 Bisha Koobaad
Bisha Koobaad 2022 (93)
Naqshadeynta wareysiga ee maalinta Talaado 25 Bisha Koobaad
Naqshadeynta naqshadda maalinta Isniin 24 Bisha Koobaad
Naqshadeynta maalinta Axad 23 Bisha Koobaad
Naqshadeeyaha maalinta Sabti 22 Bisha Koobaad
Naqshadeynta kooxda maalinta Jimco 21 Bisha Koobaad
Isgaarsiinta Muuqaalku Sergei Didyk Plates